Running Man ဆိုတာ ဒီလိုလူတွေ ရှိတဲ့နေရာပါ
Running Man Fan တွေဟာ Running Man ကို သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ခင်အားပေးကြပါတယ် ။
ရုပ်ရည်ကြောင့်လား ? ဒါလဲ အကြောင်းရင်းအစစ်ကြီးမဟုတ်လောက်ဘူး ။
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ရှင်းသွားပါပြီ ။
တစ်ခါက Running Man မှာ Wonder Girls အဖွဲ့က Yubin ဧည့်သည်အဖြစ်လာကစားခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီလိုလာကစားတဲ့ အခါမှာ မမျှော်လင့်တဲ့ accdient အဖြစ် ခုန်ကျော်ကစားနည်းမှာ သူမ လဲကျခဲ့ပါတယ် ။
သူမတိုက်ခဲ့လို့ နောက်ဘက်က စင်ကြီး သူမအပေါ်ယိုင်ပြီး ပြိုကျတော့မယ့်အချိန်မှာ
ဘေးကရပ်ကြည့်နေတဲ့ Running Man အဖွဲ့သားတွေဟာ တိုင်ပင်မထားဘဲ Yubin အနာတရမဖြစ်အောင် သူတို့ကိုယ်တိုင် အနာခံပြီး အပြေးဝင်ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒီလို နွေးထွေးတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေကို ဘယ်သူက မချစ်ပဲနေနိုင်မှာလဲ ။
တကယ့် အနစ်နာခံစိတ် အပြည့်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးကို ညှာတာတတ်တဲ့
မြင်ကွင်းလေးကို အထပ်ထပ်ကြည့်ပြီး ပိုပို လေးစားမိပြီပေါ့ ။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ရဲ့ Video File လေးကို
အောက်ပါ လင့်ကနေ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
အသေးစိတ်ကို http://www.aavashare.com/promo_&_events/544/%E1%80%A1%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8_%E1%80%96%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%84%E1%80%BC%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%80%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC_free_%E1%80%9B%E1%80%99%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9_!!!.html မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ် ... ပျော်ရွှင်စရာနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော် ...
8 Share 336 Views